Chii chinonzi Othello Syndrome | Bezzia
Chii chinonzi Othello Syndrome?
Maria Jose Roldan | 29/04/2021 23:31 | Psychology
Othello syndrome inoreva hunhu mumutambo nemunyori wechiChirungu Shakespeare. Hunhu uhwu hwaizivikanwa nekutambura negodo, zvichimukonzera kufunga nguva dzese nezvekusatendeka kwemukadzi wake. Sezvingatarisirwa, munhu anotambura neichi chirwere anokonzeresa kuti hukama hwavo hutongwe kukundikana uye kugarisana pakati pevanhu vaviri kusagadzikana.
Iri idambudziko chairo kune chero murume nemukadzi sezvo hukama hwunozova chepfu. Muchinyorwa chinotevera tichazotaura zvakawanda nezve rudzi urwu rwechirwere uye kuti chinobata sei vaviri nenzira yakaipa.
1 Chii chinonzi Othello syndrome nekuda kwe
2 Zviratidzo zveOthello syndrome
Chii chinonzi Othello syndrome nekuda kwe
Zviri pachena kuti munhu anotambura neOthello syndrome ane kumwe kunetseka padanho repfungwa. Pamusoro pezvo, pane akateedzana ezvikonzero kana zvikonzero zvekuti unosvika pakutambura mhando dzakadai dzegodo: kuzvidzora, kukuru kushushikana kwepfungwa kune mumwe wako uye kutya kwakanyanya kwekusiiwa newaunoda uye kusiiwa wega.
Iye munhu ane rudzi urwu rwegodo anogona zvakare kutambura nhevedzano yezvinetso zvemarudzi akasiyana siyana sezvazvinogona kuva nyaya yekunyanyisa kukakamira kusagadzikana kana imwe paranoid-mhando kusagadzikana. Kune rimwe divi, zvinofungidzirwawo kuti godo rakadai rinogona kukonzerwa nekunyanyisa kudyiwa kwezvinhu zvinokuvadza uye zvinokuvadza muviri sedoro kana zvinodhaka.
Zviratidzo zveOthello syndrome
Sezvatave tataura pamusoro apa, munhu anotambura neichi chirwere chirwere chegodo uye chisina kunaka cheumwe wake. Rudzi urwu rwegodo richava nezvimiro zvitatu zvakasiyana:
Iko hakuna chikonzero chaicho nei godo rakadai richifanira kugadzirwa.
Kunyanyisa uye kunyanyisa kufungidzira kwemumwe wako.
Mhinduro yacho haina musoro zvachose uye hazvina zvazvinoreva.
Kana zviri zviratidzo zvemunhu ane godo, zvinotevera zvinofanirwa kusimbiswa:
Inoshandisa kudzora kwakanyanya kweumwe wako. Anofunga kuti haana kuvimbika nguva dzese uye izvi zvinoita kuti agare akasvinura.
Iwe hauremekedze zvakavanzika zveumwe wako uye nzvimbo. Unofanira kuziva nguva dzose zviri kuitwa nemumwe wako. Izvi zvinokanganisa hukama hwavo hwemagariro.
Kutuka nekupopota zviri muchiedza chezuva. Zvese izvi zvinotungamira kumhirizhonga inogona kuve yepanyama kana yepfungwa.
Iko hakuna nzvimbo yemafungiro akanaka kana manzwiro. Zvakajairika kuti munhu ane godo atsamwe uye kusvotwa zuva rese. Haasi kufara nemumwe wake, achinyanya kuva hukama hwakavimbika.
Muchidimbu, zvakakosha kurapa rudzi urwu rwechirwere nekukurumidza sezvazvinogona. Munhu ane godo anoda rubatsiro rwehunyanzvi, kumubatsira kuti aone kuti haugone kuve nehukama nemumwe munhu nenzira ine chepfu. Kana munhu wacho asingazvibvumire kuti arapwe kana kutadza kukunda dambudziko regodo, hukama hwacho hunoparara. Hukama hunofanirwa kunge hwakavakirwa pakuremekedza uye kuvimba kwevanhu vese. Godo rezvehutano harigone kubvumidzwa muhukama, sezvo zvichizopedzisira zvaparadza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Psychology » Chii chinonzi Othello Syndrome?
Unotambura neblancorexia here? Kubata nekuve nemazino machena
6 masiki ebvudzi eichi chitubu